macOS Sierra 10.12.4 ofisialy, Apple mpamatsy, fampitahana CarPlay Android Auto sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
macOS Sierra 10.12.4 ofisialy, mpamatsy Apple, fampitahana CarPlay Android Auto ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Efa ao anatin'ny herinandro farany amin'ity volana martsa ity isika ary izany dia mandeha haingana ny fotoana. Amin'ity herinandro lasa ity dia nahita vaovao mahaliana maromaro momba ny tontolon'ny Apple sy Mac amin'ny ankapobeny isika, ny marina dia ny fahatongavan'i kinova ofisialy vaovao an'ny macOS, iOS, tvOS ary watchOS, Izy io dia efa vaovao be tokoa taorian'ny kinova beta maro be. Na izany na tsy izany dia manana vaovao bebe kokoa isika amin'ity herinandro ity sy anio Alahady, miaraka am-pitoniana bebe kokoa, dia hahita ny sasany amin'ireo miavaka indrindra isika.
Ny voalohany dia ilay kinova vaovao an'ny macOS Sierra 10.12.4 efa azon'ny mpampiasa rehetra izao. Ka raha mbola tsy nanavao ny Mac androany ianao dia azonao atao. Ao amin'ity kinova ity Nampiana safidy Night Shift ary fanatsarana hafa.
Ity vaovao manaraka ity dia mifandraika amin'ny Mpamatsy Apple. Ity karazam-baovao ity dia tena mahaliana tokoa ny mahafantatra ny antsipiriany sy ny fitsipika fototra ahafahana miasa miaraka amin'i Apple sy miantoka ny kalitaon'ireto mpiasa ireto ary koa ny vokatra amboariny.
Ankehitriny dia mandeha amin'ny fikafika kely izahay manoratra litera sy accents tsy mahazatra amin'ny Mac haingana. Amin'ity tranga ity dia azo inoana fa maro aminareo no efa mahalala azy, fa tsara ny mizara izany amin'ireo rehetra mpampiasa vaovao izay tsy nahalala ny fisiany.
Ilay mpamorona f.lux milaza fa ny fiasa Night Shift an'ny macOS 10.12.4 dia tsy mandaitra toa ny fampiharana azy. Mazava isika fa samy miasa tsara avokoa, saingy mety miharihary fa samy miaro ny azy avy.
Ary mifarana amin'ny horonan-tsary mahafinaritra sy mahavokatra ihany koa izahay amin'ny fampitahana Apple CarPlay sy Android Auto. Ireo rafitra roa ireo eo am-panaovana fanatsarana izao, saingy mahaliana ny afaka mampitaha sy mahita ny fiasan'ny iray sy ny iray hafa amin'ny horonan-tsary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » macOS Sierra 10.12.4 ofisialy, mpamatsy Apple, fampitahana CarPlay Android Auto ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Live Bright, ilay horonantsary Apple vaovao hanentanana antsika amin'ny Apple Watch
Apple dia manakarama mpanatanteraka YouTube teo aloha sy Spotify mba hanamafisana ny sehatra audiovisual